ဆရာတော်ဦးဥာဏိဿရ လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူခံတရားပွဲ
၂၅-၅-၂၀၀၈ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း
၂၆-၅-၂၀၀၈ သုခလေးပါးတရားတော်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ
၃၁-၈-၂၀၀၈ စင်္ကာပူနိုင်င NTU Alumini
၂၈-၁၂-၂၀၀၈ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း
၂။ ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်၊ ပါဠိအနက်
၃။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော၊ အနေကဇာတင် တရားတော်
၄။ ဗဟုဒီတရသုတ္တန် တရားတော် (၃၁-၁၂-၁၉၇၆)
၅။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၁) (၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ပြာသိုလဆန်း ၁၃ရက်ည)
၆ ။ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန်(၂) (၂-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ပြာသိုလဆန်း ၁၄ရက်ည)
၇။ သံကိစ္စသာမဏေ တရားတော် (၇-၄-၁၉၇၇)
၁။ အာနာပါန သတိပဌာန် (၁၆-၅-၁၉၇၇)
၂။ ဒါနအနုမောဒနာကထာ တရားတော် (၂၀-၁၁-၁၉၇၇နေ့လည်၂နာရီ)
၃။ နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ် ဗုဒ္ဓ (၂၇-၁၂-၁၉၇၇)
၄။ ဝေလာမ သုတ္တန် (၁၀-၁-၁၉၇၈)
၆။ ပဏ္ဍိတ သာမဏေ (၉-၂-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တွဲလဆန်း ၂ရက် ည)
၇။ သုဒ္ဓတ သုတ္တန် (၁-၃-၁၉၇၈)
၁။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၁) (၃-၃-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တွဲလပြည်.ကျော် ၉ရက် ည)
၂။ ဆန္ဒောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၄-၃-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တွဲလပြည်.ကျော် ၁၀ရက် ည)
၃။ ကာမသုတ္တန် (၇။၃။၁၉၇၈)
၄။ ကာမဇာတ် တရား (၈-၃-၁၉၇၈)
၅။ ဒက္ခိဏ၀ိသုဒ္ဓိလေးပါး တရားတော် (၂၉-၄-၁၉၇၈ညနေ ၆နာရီ)
၆။ နိကြေဓသာမဏေ တရားတော် (၁၉-၉-၁၉၇၈)
၁။ ကေသမုတ္တိသုတ္တန (၂၁-၁၁-၁၉၇၈)-(၁၃၃၉တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၁ရက် ည)
၂။ သဒ္ဒါနှင့်မစ္ဆရိယတိုက်ပွဲ (၂၄-၁၂-၁၉၇၈)
၃။ အနုရုဒ္ဓါသုတ္တန် တရားတော (၂-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ပြာသိုလဆန်း ၅ရက)်
၄။ မေတ္တ သုတ္တန်တရားတော်(၁) (၁၇-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ပြာသိုလပြည်.ကျော် ၅ရက်ည)
၅။ မေတ္တ သုတ္တန်တရားတော်(၂) (၁၈-၁-၁၉၇၉)-(၁၃၄၀ပြာသိုလပြည်.ကျော် ၆ရက်ည)
၁။ ဂီလာနသုတ္တန် (၁-၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၀ တပို.တွဲလဆန်း ၅ရက်ည)
၂။ ဝေဒနာနုပဿနာ (၂၀-၄-၁၉၇၉) (၁၃၄၁တန်ခူးလပြည်.ကျော်၁၃ရက်ည)
၃။ ၀ိဘက်တော် (၁၂) ပါး တရားတော်(၁) (၃-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၈ရက်ည)
၄။ ၀ိဘက်တော် (၁၂) ပါး တရားတော်(၂) (၅-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၀ရက်ည)
၅။ ၀ိဘက်တော် (၁၂) ပါး တရားတော်(၃) (၇-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၂ရက်ည)
၁။ ၀ိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၄) (၈-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၃ရက်ည)
၂။ ၀ိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၅) (၉-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လဆန်း ၁၄ရက်ည)
၃။ ၀ိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၆) (၁၀-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်. ဗုဒ္ဓနေ.)
၄။ ၀ိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၇) (၁၄-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၎ရက်)
၅။ ၀ိဘက်တော်(၁၂) ပါး တရားတော်(၈) (၁၅-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၅ရက်)
၁။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၁) (၁၁-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော် ၁ရက်)
၂။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၂) (၁၆-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၆ရက်)
၃။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၃) (၁၇-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော် ၇ရက်)
၄။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၄) (၂၀-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၁၀ရက်)
၅။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၅) (၂၁-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော် ၁၁ရက်)
၆။ သင်္ဂါလောဝါဒသုတ္တန်(၆) (၂၂-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ နှစ်ဦးကဆုန်လပြည်.ကျော်၁၂ရက်)
၁။ ကုဒါလပဏ္ဍိတဇာတ် တရားတော် (၂၈-၁၁-၁၉၇၉)
၂။ သာမဏေကျော်လေးပါး တရားတော် (၁၅-၁၂-၁၉၇၉)
၃။ ဗြသနတရားငါးပါး (၁၇-၁၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နတ်တော်လပြည်.ကျော်၁၄ရက်ည)
၄။ ကပ်ကြီးသုံးပါးတရား (၁၉-၁၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၁ပြာသိုလဆန်း ၂ရက်)
၅။ ၀နရောပသုတ္တန် တရားတော် (၁၈-၁-၁၉၈၀)
Labels: တရားတော်များး, သပိတ်အိုင်ဆရာတော်